Etu esi ewepu uzo ahia ahia nke oma | Martech Zone
Kedu ka esi etinye usoro azụmaahịa azụmaahịa na-aga nke ọma? Maka ọtụtụ azụmaahịa, nke a bụ ajụjụ nde (ma ọ bụ karịa) dollar. Ma ọ bụ ajụjụ magburu onwe ya ị na-ajụ. Otú ọ dị, nke mbụ, ị ga-ajụrịrị, gịnị na-akọwa dị ka a atụmatụ azụmaahịa na-aga nke ọma?
Kedu ihe bụ usoro azụmaahịa na-aga nke ọma?
Ọ na-amalite na a ihe mgbaru ọsọ ma ọ bụ ihe mgbaru ọsọ. E nwere ihe mgbaru ọsọ dị ole na ole ga-enyere gị aka ịlele ojiji nke ahịa akpaaka. Ha gụnyere:
Ebumnuche Azụmaahịa Na-aga nke Ọma rụpụtara na dịkwuo na:
Ruru Eru edu ọgbọ
Ebumnuche Azụmaahịa Na-aga nke Ọma rụpụtara na a Mbelata na:
The ahịa okirikiri
Re ahịa n’elu
Echefuola ire ahịa
Ọbụna ịtụle ọtụtụ ebumnuche a ị nwere ike mezuo, ịkwado atụmatụ azụmaahịa azụmaahịa na-aga nke ọma.
Kọwapụta Ahịa Azụmaahịa Gị
Echere m banyere oge 20 + nke ahịa akpaaka m nyeere aka itinye na ihe ndị nwere ihe ịga nke ọma nwere. Achọpụtara m ihe abụọ yiri nke dị na atụmatụ azụmaahịa na-aga nke ọma na m bụ akụkụ nke: njikwa ndu dị irè na ọba akwụkwọ ọdịnaya.
Iduzi ndu dị irè bụ akụrụngwa sara mbara nke ịzụ ahịa azụmaahịa yabụ m ga-agbaji ya na mpaghara bụ isi nke njikwa ndu ga-enyere azụmaahịa ọ bụla aka ịchọta ihe ịga nke ọma na-ebute akpaaka ahịa. Iji malite, ire ahịa na ịre ahịa ahịa kwesịrị ịbịakọta ọnụ iji kọwaa ụzọ. Nke ka mma, kọwaa ndu n'etiti profaịlụ ma ọ bụ personas. Kedu ihe bụ omume igwe mmadụ / ụkpụrụ omume igwe nke ga-abụ ndu?
Tọ ntọala gị na-esote. Nke a nwere ike ịdị nfe dị ka usoro ọdịnala ọdịnala dịka MQL, SAL, SQL, wdg. Ma ọ bụ, ụlọ ọrụ nwere ike ịmepụta nkọwapụta usoro nhazi omenala nke na-achọpụta nke ọma usoro ndị pụrụ iche maka usoro ịzụ ahịa nke ndị ahịa ha.
Mgbe emechara, ịkọwapụta nkọwa na usoro, ịchọrọ ịkọwa ọdịnaya dị na ọkwa nke ọ bụla. Nke a ga - enyere gị aka ime ka ịzụlite ndu dabere na ọkwa nke ndu ugbu a. Nke a bụ ebe ụlọ akwụkwọ ọdịnaya siri ike na-abanye. Site n'inwe ọdịnaya dị ukwuu ịkekọrịta n'akụkụ niile nke olulu ahịa, ịzụ ahịa ahịa ahịa nwere nzube. Enweghị ezigbo ọba akwụkwọ ọdịnaya, ị ga-enwe obere ihe ị ga-ekwu ma ọ bụ kesaa uru ọ bụla.
Mepụta Mmemme Nurturing Gị
Laghachi na nurturt na-eduzi, ịkọwapụta na ịmepụta mmemme nurturt bụ mmemme dị oke mkpa n'ịgbasa akpaaka ahịa nke ọma. Nzọụkwụ ịkọwapụta ụzọ / ndu ndu na-arụ ọrụ dị mkpa ebe a nke mere m ji kpọọ ha aha, mana mmemme nzụlite gị ga - eme ma ọ bụ mebie azụmaahịa azụmaahịa azụmaahịa gị.
Maka mmemme na-azụlite ndu, a na-atụ aro ya nke ọma ịmepụta mpempe akwụkwọ nke usoro nurturing gị iji nyere aka wulite ụzọ ịzụlite, kọwaa ihe ndị dị mkpa, chọpụta ọdịiche ọdịnaya na ịhazi ọrụ na ịre ahịa. Site na imepụta na nyochaa ndị eserese a (dịka otu ndị ahịa na ọrịre ahịa), ị nwere ike ịbịakọta ọnụ na mgbasa ozi dị irè, dozie esemokwu nwere ike ịnye ọrụ na usoro ọrụ mkpọsa dịka ọ dị mkpa.
Iji zụlite nduzi na-arụ ọrụ nke ọma, agbanyeghị, ịkwesịrị inwe ike iwepụta ọdịnaya dị mkpa n'oge kwesịrị ekwesị. Inwe ọba akwukwo di ike ma debe ya ka o buru uzo. Inwe akpaaka ahia gi na-ebute nnyefe nke ihe di nkpa dabere na imeputa iwu ahia di omimi nke na-agbanyita ihe ndi ozo na ihe ndi ozo.
Ihe omimi ị nwere ike ịgbaso ọrụ ndu ma mepụta mkpọsa na-ebute ụzọ dị iche iche na-azaghachi omume nchịkwa mmadụ, ọrụ ga-aga nke ọma na ị na-ere ahịa akpaaka. Nlekọta nlezianya na-elekwasị anya ga-enwe ntakịrị nlọghachi (ma ọ bụrụ na ọ bụla). Ebumnuche na-eduga nurturing site na iji mpaghara nchekwa data dị elu na nke bara uru, ọdịnaya dị mkpa ga-emepụta ahụmịhe bara uru maka ndu gị yana n'ikpeazụ enyere gị aka ịtinye ihe mgbaru ọsọ (s) maka akpaaka ahịa nke ị kọwapụtara na mbụ.
Segmenting gị ahịa na-eduga
na Nsonaazụ Azụmaahịa Net-Nsonaazụ, anyị ji onwe anyị na-enwe ihe kasị mma elu nchekwa data nkewa na-eduga nurturing ngwaọrụ na azụmahịa. Gbasa ozi ezubere iche siri ike na ọdịnaya dị mkpa bụ ọkwa ọhụrụ maka mkpọsa ahịa niile ma anyị emeela ka ndị ahịa na-eme na Net-Nsonaazụ. Ọrụ nkewa anyị bụ isi nke Net-Nsonaazụ ma na-enyere gị aka iduzi mmemme ị na-azụlite n'etiti ọrụ ndị ọzọ dị mkpa na-ere ahịa dị ka nsonye mbu, ngbasa ozi ozugbo, ịkọ akụkọ na ndị ọzọ.
You nwere ike ịmepụta iwu nkewapụta miri emi iji bido mkpọsa ọ bụla na ngalaba ọ bụla na mkpọsa a na-arụ ọrụ site na otu injin nkewa dị ike, na-enye ohere maka ọtụtụ narị ngwakọta nke ọgụgụ isi n'ụzọ dị mfe na ịmegharị ụzọ na-eduga site na usoro agụmakwụkwọ na ịzụ ahịa.
Tags: belata ire ere furu efubelata ahia n'elubelata ire ereidokwa ahịa akpaakadịkwuo revenuendu nurturingduru nurturing atụmatụakụrụngwa ahịaNkeji akpaaka ahiaahia akpaaka atụmatụruru eru na-edugaohere ire erearụpụtaghị ahịa
Michael bụ Director nke Ahịa nke Nsonaazụ Net. Michael bụ onye na-emepụta nkà na ụzụ na-emepụta ihe, nke na-emepụta ihe na nke na-agbanwe agbanwe nke na-enweta ihe ịga nke ọma site n'ịghọta usoro, ịmepụta ihe okike na iji ihe ọgbara ọhụrụ eme ihe iji wulite mmata nke ọma na nkwado nke ihe mgbaru ọsọ ahịa na ire ere.
Nkwado ndị a ma ama bụ nhọrọ Nhọrọ A Ga - enwe?
Sep 4, 2015 na 7: 56 AM
Lovehụnanya i kwuru banyere usoro eserese na edemede gị Michael! Ihe ndị a nwere ike ịdị mgbagwoju anya ma achọpụtala m na ọ dị oke mkpa. Karịsịa ma ọ bụrụ na ị na-eji ngwá ọrụ dị ka Hubspot ebe ọ na-enweghị ihe nnọchiteanya nke foneelu ị na-ewu.
Sep 29, 2015 na 12:13 PM
“Ihe miri emi ị nwere ike soro ọrụ na-eduga ma mepụta mkpọsa na-ebute ụzọ dị iche iche nke na-emeghachi omume na nchịkwa mmadụ, ọrụ ga-aga nke ọma na ị na-ere ahịa akpaaka.” Hụ nke a n'anya na enweghị ike ikwenye karịa.
Mike na-achọ ịmata ka ị si anụ ka ị si kọwaa ma jiri "Arụ Ọrụ" na "Ọrụ Arụ" iji zụlite mkpọsa ịzụlite ahaziri iche karị?
Jenụwarị 21, 2018 na 11:34 PM
Edemede ederede Michael! Tọ usoro ịzụ ahịa ịzụ ahịa dị mma bụ n'ezie ntọala maka ihe ịga nke ọma na afọ ndị na-abịanụ
Jun 20, 2021 na 6:04 AM
Edemede a bu ihe eji emeghe anya na ntinye ngwa ahia.